शहरभित्र प्रधानमन्त्रीको काम सुरेश प्रधानमन्त्रीको काम
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला अत्यन्त क्रुद्ध मुडमा हुनुहुन्छ । त्यो पनि अरू कसैस�ग होइन, आ�नै देशका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवस�ग । प्रधानमन्त्री जहा��जहा� जानुहुन्छ त्यहा��त्यहा� यही गुनासो गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले मलाई कामै गर्न दिनुभएन । खास गरी उहा�ले राष्ट्रपतिसमक्ष केही थान अध्यादेश पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले जसलाई जारी गर्नुभएन । जसको परिणाम हो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको क्रोध । त्यो पनि सानोतिनो होइन, ठूलो साइजको क्रोध । अर्को पनि कारण छ । त्यो के भने केही समयअघि मात्रै राष्ट्रपति स्वयंले उहा�लाई देशको कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, विडम्बना हेर्नोस्, राष्ट्रपतिले उहा�लाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा त गर्नुभयो तर काम गर्न भने पटक्कै दिनुभएन । आफै�ले कामचलाउ भन्ने अनि कामचाहि� गर्न नदिने ? यो कस्तो चाला हो ? यहा� राष्ट्रपति महामहिमले कुरा अलिकति नबुझेको देखियो । एउटा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पठाएको अध्यादेश किन जारी गर्ने भन्ने उहा�लाई लागेको होला । तर, यथार्थमा त्यस्तो होइन । हाल देशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई जो हुनुहुन्छ, उहा�को कामै अध्यादेश ल्याउनु हो । अतः अध्यादेश ल्याएर उहा�ले राष्ट्रपतिलाई कुनै चुनौती दिइरहनुभएको छैन । आ�नो काम गरिरहनुभएको छ । के अध्यादेश ल्याउनु उहा�को काम होइन ? देशमा अहिले संविधान छैन, संविधानसभा छैन, संसद् छैन । प्रधानमन्त्रीले के काम गर्ने ? उहा�स�ग हाल बा�की रहेको एउटै मात्र काम भनेकै अध्यादेश ल्याउने हो । अब त्यो काम पनि गर्न नदिने हो भने उहा�लाई कसरी कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने ? यो त पूर्ण प्रधानमन्त्री नै भयो नि, होइन र ? डन भाइको चिन्ता
कुनै जमानामा काठमाडौंलाई मन्दिरै मन्दिरको सहर भनिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो भनाइ बदलिएको छ । अहिले काठमाडौं मूलतः डनै डनहरूको सहर बनेको छ । जताततै डनहरूको शासन छ । एउटा त्यस्तै चर्चित डन मेरो घरको स�गै बस्थ्यो । डन भनेपछि अरूस�ग त कडै व्यवहार गर्दो हो तर मस�ग भने �नर्मल� छ । अझ मानले दाइ भनेर पुकार्छ । केही दिन भयो, उक्त डन भाइलाई मैले घरबाट निक्लेको देखेको छैन । पहिले खुब व्यस्तजस्तो लाग्ने डन भाइ आज�भोलि अलि फुर्सदिलो देखिन्छ । हिजो बिहान आ�नो घरको गार्डेनमा बसेर डन भाइ पत्रपत्रिका पढ्दै चिया खा�दै थियो । मैले सोधिहाले�, �भाइ, आज�भोलि त तपाईंलाई घरमै बढी देख्छु । सन्चो छैन कि क्या हो ?�
उनी एकैछिन मुस्कुराए । अनि भने, �त्यस्तो खासै होइन दाइ । यो पुलिस फोर्समा कुनचाहि� आइजिपी आउला भनेर कुरिबसेको थिए� तर खोइ यिनीहरू नियुक्ति नै गर्दैनन् । एउटा आइजिपी नियुक्त गर्न पनि यिनीहरूमा मारामार छ । कन्ट्री त खत्तम भयो दाइ ।�
�अ�...खत्तमै छ,� कन्ट्रीप्रति डन भाइको चिन्ताले मलाई पनि चकित बनायो । सोधे�, �अनि भाइलाई यो आइजिपीको नियुक्तिले किन रोक्यो त ? पुलिस फोर्समा पनि छ, तपाईंको आफन्त ?�
उनी फेरि दोस्रोपटक मुस्कुराए, �हैन...अब...दाइलाई थाहा छ�दै छ नि मेरो काम । पुलिसस�ग हाम्रो कुनै सरोकार त छैन तर पुलिस नै हाम्रो प्रमुख आधार पनि हो । अलिकति केटाहरू बढाउने विचार गर्दै थिए�, बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन यही आइजिपीको नियुक्तिबाट थाहा हुन्छ । त्यही भएर अस्तिदेखि यही खेलमा लागिरहेको छु । तर, खोइ यिनीहरू डिसिजन नै गर्दैनन् । मलाई त चिन्तै लागिसक्यो ।�
डन भाइको अनुहारमा चिन्ता मिसिएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । ७० बु�दे माग
माओवादीका एकमुष्ट नेताहरूको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी ७० बु�दे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसरी एकैचोटि ज्ञापनपत्र आउ�दा अरू प्रधानमन्त्री भए त आ�त्तिएर भाग्थे होलान् । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भाग्नुभएन । किनभने यो ज्ञापनपत्रमा ४० बु�दा उहा� आफ�ैले तयार पार्नुभएको हो । १७ वर्षअघि उहा� आफै�ले यस्तो ४० बु�दे ज्ञापनपत्र तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनुभएको थियो । त्यसपछि जनयुद्ध सुरु गर्नुभएको थियो । जनयुद्ध सुरु हु�दा ४० बु�दे रहेको माग जनयुद्ध समाप्त हु�दा ७० बु�दे भएछ । बढेको ३० बु�दा जनयुद्धकै उपलब्धि भन्नुपर्ला । जनयुद्धले देशमा केही विकास गरेन भन्न मिल्दैन । कमसे कम जनताको मागमा राम्रै विकास गरेको छ । पहिले ४० वटा मात्रै रहेको जनताको माग अहिले बढेर ७० पुगेको छ । यो सानो विकास होइन ।
डा. बाबुराम भट्टराईले तयार पारेको ४० बु�दामै अर्को ३० बु�दा थपेर कमरेड मोहन वैद्यले बुझाएको हो । जाबो एउटा मागपत्र त अर्काको कपी गर्ने वैद्य समूहले देशमा अरू के गर्ला खै ? फेरि यो मागपत्र डा. भट्टराईलाई बुझाएर के हुन्छ ? डा. भट्टराई आफ�ैले त यो काम गरिदेऊ भनेर १७ वर्षअघि अरूलाई अह्राउनुभएको थियो । अब त्यही काम गरिदेऊ भनेर उहा�लाई नै अह्राएर हुन्छ ? यो त हुन सक्ने कामै होइन नि � प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम